Iphakathi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Amathiphu aphezulu ekunakekeleni nasekutshaleni izinhlobo zepareyard Lada ensimini yakhe
Izithelo ezimnandi, ezinobucayi noma eziluhlaza, ezicebile kakhulu, ezithinta ushukela sekuyisikhathi eside zibhekwa njengezithelo ezizithandayo kakhulu. Iphayitha iveza umuzwa wokugcwalisa, futhi u-pulp wayo ushukela nje emlonyeni wakho. Iningi lezinhlobo ze-pear liyaziwa, kepha enye yezinhlobonhlobo zezintandokazi yi-Lada pear ehlukahlukene. Namuhla sizokhuluma ngezici ezikhethekile zokukhula kulokhu okuhlukahlukene, ngakho konke okuhlobene nokunakekelwa kwezinhlobonhlobo ze-Lada.
Indlela yokubhekana nezinambuzane zamapheya
Zonke izitshalo izitshalo zibhekene nokuhlaselwa kwezinambuzane, futhi amapheya azikho. Ungathathi nhlobo izindlela zokuvikela izihlahla okungenani ngokungenasici, njengoba lokhu kungaholela ekufeni kwesitshalo kuphela, kodwa wonke umuthi. Kule ndaba, abalimi bezinsizwa bakhathazekile kakhulu ngombuzo: "Yiziphi izinambuzane eziyingozi nokuthi iyiphi indlela okufanele isetshenziswe ukuze izinambuzane zepayari zisuke ziphuma emthini?"
Izinhlobonhlobo zamapheya "Nika": ukufaneleka okulungile nezici zokunakekelwa
Izithelo eziphakathi kwe-pear ziletha umuzwa we-saturation okusheshayo futhi zijabule nge ukunambitheka kwazo okumnandi futhi zenze iphunga elimnandi. Enye yezinto ezithandwa kakhulu yizinhlobonhlobo zamapheya "Nika", okuningi mayelana nokuthi sizoxoxa ngani kulesi sihloko. Incazelo ye-pear yebanga elithi "Nika" Ukuphakama kwesihlahla sezinhlobonhlobo "Nika" kuvamile, kanti izinga lokukhula ngokwalo lilinganiselwe.
Ukukhethwa kwezindlela zokupheka zokuvuna amapheya ebusika
Ukuphakamisa amapheya ensimini kubonisa ukuphela kwehlobo. Ungagcina ucezu lwayo ngokulungiselela lesi sithelo esishisayo ebusika. Amakhemikhali, amakhemikhali, ama-marmalades, ama-compotes, ama-syrups nezithelo ezifakwe emanzini, kanye nama-dessert ayenziwe nawo, azovusa izinsuku ezibandayo zasebusika nasebusuku. Pear jamu izindlela zokupheka Ukupheka for izikhonkwane eliphakathi kwebusika kukhona ezihlukahlukene, futhi cishe zonke zilungiswe ngaphandle inqubo eyingozi yokubulala inzalo.
Izindlela zokuvuna amapheya ebusika
Iphayari isithelo esihlwabusayo kakhulu futhi esinempilo esingasetshenziselwa kuphela uhlobo lwayo lwemvelo noma uhlobo lwezinhlamba, imishado, ama-marmalades, izithelo ezitshontshiwe, njll, kodwa futhi njengesithako esinikeza ukunambitheka okusha kokubili kokubili ama-dessert nama-saladi, isobho nezisekelo inyama nenhlanzi izitsha. Ezinye izinhlobo zamapheya zingagcinwa kahle kuze kube sekushiseni, kepha umbuzo wokuthi kufanele uvunwe kahle kanjani amapheya ebusika uhlala ufanelekile kwabaningi besifazane.
Izinzuzo nokulimala kokudla amapheya
Ipeyari iyalinywa iminyaka engaphezu kwezinkulungwane ezintathu. Endle, likhula kulo lonke elase-Eurasia kuze kufike kuma-degrees angu-60 enyakatho ye-latitude. Ososayensi baye baqaphela izikhungo ezimbili zasendulo zokuhlalisa izilwane zasendle - i-Ancient China ne-Asia Minor, kodwa indawo lapho kuqalelwa khona yayingaziwa ngokuqinisekile. Ukunambitheka okuthakazelisayo nezakhiwo ezinempilo kwenza i-pear eyodwa yezithelo ezithandayo kakhulu (kunezinhlobo ezingaphezu kuka-5000 ezilinywa).
Pear "Elena": izinzuzo kanye nokuqeda izinhlobo, ukutshala nokunakekelwa
Kusukela ezikhathini zasendulo, i-pear bekuyisihlahla somuthi esithandwa kakhulu. Lesi sihloko sizokusiza ukutshala ikhasi elihlukahlukene elithi "Elena" ngaphandle kwezinkinga futhi ujabulele izithelo zalo ezihlwabusayo. Izimpawu zamapheya ezihlukahlukene "Elena" Pear "Elena" kuyinto ezihlukahlukene ebusika zakuqala. Lesi yisihlahla esincane esifana nomkhiqizo we-pyramidal.
Ukuhlangabezana nezinhlobo eziphakathi kweKokinskaya
I-pear ithandwa ngabalimi ngenxa ye-pulp yayo ethakazelisayo nezithelo zamanzi, ukungathobeki kokulima kanye nezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo. Namuhla kukhona ukukhethwa okukhulu kwezinhlobo zezikhathi zokuvuthwa ezihlukene eziphikisana nezifo nezimo zezulu - ukumelana kwamaqhwa, izinkathi ezomile. Ngenye yezinhlobonhlobo zamapheya - inkhulumo yeKokinskoy kulesi sihloko.
Ezihlukahlukene eziphakathi kwe-pear: incazelo, izici zokutshala nokunakekelwa
Amapheya, ikakhulukazi, izitshalo ezingenakuzithoba ezingadingi ukunakekelwa okukhethekile noma izimo ezikhulayo. Ngenxa yabalimi, abalimi banamuhla banethuba lokugcwalisa iziqoqo zabo zezihlahla zezithelo nezinhlobo ezinhle kakhulu ezifanele ukulima ezindaweni ezihlukahlukene zezulu. Umlando wezinhlobonhlobo zezinhlanzi ze-pears "I-Rogned" Izinhlobonhlobo zamapheya "I-Rogned" yisithelo sabasebenzi baseRussia abasebenzayo.
Izingane eziphakathi kwezingane: incazelo yezinhlobonhlobo, ukutshala nokunakekelwa
Среди летних сортов груш самым ранним по праву считается груша Детская, которая к тому же отличается особенно сладким вкусом и хорошей урожайностью. По этой причине ниже мы подробно изучим особенности выращивания груши Детской, чтобы каждый садовод мог украсить ей свой участок. Umlando wokwakhiwa kwezingane ezihlukahlukene eziphakathi kwezilwane Izithombo zokuqala ezihlukahlukene ze-pear Izingane zitholakala emasimini ase-Russian-wonke eMoscow, lapho abakhiqizi baseYurophu basebenza kuyo.
Amathiphu amahle kakhulu kanye nezincomo zezinhlobo eziphakathi kwezikhukhula zezolo lika-Augustus
Namuhla, kunezinhlobo eziningi zezinhlayiya zamapheya ezenziwe, phakathi kwazo lapho amazolo ka-Agasti ethatha indawo ehloniphekile. Wathandana nabalimi ukuzithoba nokuvuna okukhululekile. Yikuphi okunye okuphawulekayo okuphakathi kwe-Agasti amazolo, kanye nalokho incazelo yalo kanye nemithetho eyisisekelo yokunakekelwa, esikuchaza ngezansi. I-pear Avgustovskaya idokodo: incazelo yezinhlobo ezihlukahlukene ze-Avgustovskaya dew yavulwa ngo-2002 ngokudlula izinhlobonhlobo ze-Tenderness ne-Sucumph Pakgam yi-breeder odumile S.
Amapheya ahlukahlukeneko I-Memory Zhegalov: izinzuzo nezindleko, ikakhulukazi ukutshala nokukhathalela
Amapheya - okuthakazelisayo kakhulu, kanye nesithelo esihle kakhulu. Kusukela emaapula ajwayelekile avamile ahlukanisa ukunambitheka okumnandi nephunga elimnandi. Ngokuvamile emasimini nasezindaweni zasemadolobheni kunezihlahla eziningi zama-apula kunezihlahla eziphakathi kwe-pear.Mhlawumbe lokhu kungenxa yezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zepey. Njengomthetho, zonke lezi zinhlobonhlobo ziyafana kakhulu.
Jikelele imithetho kanye nezincomo zokutshala amapheya entwasahlobo
Ukutshala yisigaba esibaluleke kakhulu sokulima. Uma kukhiqizwa ngokungalungile, isivuno esihle sizovuthwa isikhathi eside, noma, cishe kungenzeka, ungalindelanga ukuvuna nhlobo. Indlela yokukhetha isikhathi sokutshala? Ngakho-ke, umbuzo wokuqala uvela kumgadi wegadi oyifunayo ofuna ukutshala isihlahla: kungcono nini ukutshala ipey entwasahlobo?
Indlela yokubhubhisa umlenze wesikhuni phezu kwephayari
Ngokuvamile, balimi babhekene nezifo ezihlukahlukene zezihlahla nezinambuzane. Omunye wabo uyi-mite yamapare, nokuthi angayibhekana kanjani nayo, sizoxoxa kulokhu kulesi sihloko. "Isitha" sibheka kanjani? Inkathazo inamanani amancane kakhulu - ubude bomuntu omdala kuphela ngu-0.18 mm kuphela. Izinambuzane zinombala omhlophe, ozofika ekwindla esikhundleni sabantu abomvu noma obomvu obukhanyayo.
Ungasindisa kanjani ikhasi elikugqwala?
Umonakalo wokugqwala kwe-fungal ujwayelene nabo bonke abalimi abanamapulazi abo abathandekayo babo. Lesi sifo asithathi nje kuphela ukubonakala kwesihlahla, kodwa futhi silimaza isitshalo. Namuhla sizoxoxa ngendlela yokuhlukanisa ukugqwala kwesola kwezinye izifo, ukuthi kuyingozi kangakanani nokuthi uyayiphatha kanjani.
Indlela yokulahla ama-moths ngamapheya
Enye yezinambuzane eziyingozi kakhulu abalimi abahlangana nazo lapho bekhula izihlahla ze-pear yi-moth yezinambuzane. Le nkathazo ikwazi ukushaya cishe yonke indawo yesitshalo ngesikhathi esifushane kakhulu. I-pearheheet idinga izindlela ezisebenzayo, ezisheshayo, ezibaluleke kakhulu, nezindlela zokuphepha zezitshalo zokubhekana nazo.
Indlela yokutshala ipheya entwasahlobo: imiyalelo ngesinyathelo ngesinyathelo
Ukuxhunyelela i-stalk pear kuyindlela yokutshala izimbali ezithakazelisayo, ngosizo ongakwazi ukuhlukanisa ngayo ingadi yakho kanye nokudla kwakho, uthole ithuba lokususa izithelo ze-varietal eziphakathi kwe-pear noma eminye imithi. Ekugcineni, kungase kube nesifiso sokuzama into entsha. Izizathu zingase zihluke, kodwa akulimazi ukutadisha le mbono, ngaphambi kokuqala umsebenzi othakazelisayo wabalimi - ukugoma.
Siyazi kangcono nepeyari yebanga elithi "Krasulya"
"I-Krasulya" iyinhlobonhlobo ye-pear ehlobo, ethandwa futhi ethandekayo phakathi kwabalimi ukuze banambithe izithelo nokungazitholi ekulimeni. Ngenxa yobulukhuni bawo obusika, i-pear ingakhula ezindaweni ezibandayo. Umlando wezinhlobonhlobo zezimapheya "Krasulya" Amapheya "Krasulya" - umkhiqizo womsebenzi wokuzalanisa usosayensi we-South Ural Scientific-Research Institute for Ukulima kanye namazambane,
Pear "Petrovskaya": incazelo, ukutshala nokunakekelwa, izinzuzo kanye nezimo ezihlukahlukene
Izinhlobo ezihlukahlukene zamahlobo zasehlobo "Petrovskaya" yavulwa ngo-1959 ngokudabuka inhlamvu. Isihlahla sinokuphakama okulinganiselwe nobukhulu bomqhele, amagxolo anesundu futhi ashelele. Amagatsha amakhulu atholakala esitokisini esiseduze ngakwesokudla. Amagatsha aphikisiwe, amalungiselelo abo ajwayelekile, aphezulu naphakathi. Izithelo zokukhiqiza - uhlobo oluxubekile.
Ungasusa kanjani isikhala esikhwameni
I-pear ngumuthi omuhle ongabonakala kakhulu kunoma iyiphi insimu. Kodwa yini okufanele uyenze lapho umuthi othandekayo wonke umuntu ehlaselwa ngokungazelelwe ngesikhumba? Yini eyingozi futhi i-Scab ivelaphi-isifo esijwayelekile sofungal ngokuvamile esitholakala ezihlahleni zesimo sezulu esiphezulu. I-agent causative yesifo yi-marsupial mushroom Venturia pirina.